Ukuphupha kwabahambi Discover ➡️ ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uninzi lwabantu luyakonwabela ukuphuma emakhayeni abo kwaye baphonononge iindawo ezintsha ngelixa bekwiholide. Iinjongo zeehambo zethu zinokwahluka kakhulu: abanye abakhenkethi banokutsalwa lulwandle, abanye ziintaba. Iihambo zesiXeko zikwathandwa kakhulu. Kuyenzeka ukuba sibabone abahambi bephindaphindeka kuwo onke amaxesha onyaka okanye sihamba njengabahambi nathi.
Nangona kunjalo, oku akuyonyani kuphela ngokwenyani. Kwakhona emaphupheni ethu sinokuhlangana namaqela abahambi. Sinokubabona ngelixa abakhenkethi behlola indawo yethu yokuhlala. Mhlawumbi sikwisikhululo sikaloliwe okanye kwisikhululo seenqwelomoya kwaye sibona izihlwele zabahambi apho.
Kodwa athetha ntoni la maphupha? Lutolikwa njani uphawu "lomhambi"?
1 Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukubona kwabahambi kuhlala kubonisa inyani ezayo zokuhamba phakathi. Iphupha kufuneka lilungiselele umntu amava alandelayo kude nekhaya kwaye aqonde ukuba kungekudala uya kuba ngumkhenkethi phakathi kwabahambi.
Kodwa le ntsingiselo icacileyo ayihlali isemva kophawu. Ngamanye amaxesha ikwabhekisa ku- ubomi bentlalo okanye imicimbi yothando. Ukuphupha kuya kwenza izihlobo eziza kukuonwabisa kakhulu, kodwa azinakuhlala ixesha elide. Kwinqanaba elinengqiqo, kuya kufuneka uqaphele ukuba ubuhlobo okanye ubudlelwane obuziphumo abunakuba nekamva elihlala lihleli. Njengomhambi, omnye umntu uya kunyamalala kwicandelo lombono kunye nobomi ngokukhawuleza okukhulu.
Ngubani ephupheni oyinxalenye yeqela labahambi, unqwenela umbono ngokubanzi. ezahlukeneyo. Umntu ufuna ukubaleka kubomi babo bemihla ngemihla kunye nokutshintsha into. Kule meko, unokucinga ngokutshintsha imisebenzi okanye apho uhlala khona. Nangona kunjalo, esi sigqibo kufuneka siqwalaselwe ngononophelo.
Ukuba wena ungumhambi kwiphupha lokukhwela intaba, uhlala ufuna ukuya kwindawo ekuyiwa kuyo, kodwa ungazibopheleli kuyo el mundo yomlindo.
Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwamaphupha, abahambi bafuzisela iinxalenye ze ubuntu bakho. Nabani na ophupha ngokuhamba nabahambi uqala ukubazi ngcono la macala abo.
Kule meko, kunokuba kubaluleke kakhulu ukuba abantu abaphuphayo baphuhlise ubudlelwane obukhethekileyo kwaye ngubani kwabahambi ongamthandiyo ephupheni. Ngokwe-psychoanalysts, oku kunokusetyenziselwa ukugqiba ukuba zeziphi iindawo zobuntu ezibaluleke ngakumbi kwaye ezingabalulekanga kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba ubona abahambi ephupheni, oku kungabonisa isicelo esivela kwi-subconscious, iluncedo ngakumbi yiba. Ngamanye amaxesha ulonwabo lomntu buxhomekeke ekuxhaseni omnye umntu kwaye akwazi ukonwabela umbulelo wakhe. Ukuba udibana nabahambi xa ulele ubuyela ekhaya, unokulangazelela amaxesha adlulileyo.
Uphawu lwephupha «abahambi» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, abahambi babekwa ephupheni emva komnqweno wabo. Yoluntu Umntu onomdla angathanda ukufumana iindlela ezintsha zokomoya kunye nabanye.
Iphupha leSitolo sePawn